मर्कूस १० | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१० त्यहाँबाट उठेर उहाँ यर्दन नदीपारि यहूदियाको सीमावर्ती इलाकाहरूतिर पुग्नुभयो अनि फेरि मानिसहरूको भीड एकसाथ उहाँकहाँ आए र आफ्नो बानीअनुसार उहाँले तिनीहरूलाई फेरि सिकाउन थाल्नुभयो। २ तब फरिसीहरू उहाँकहाँ आए अनि एक जना पुरुषले आफ्नी पत्नीसित सम्बन्धविच्छेद गर्नु के ठीक हो भनी सोधेर उहाँको परीक्षा गर्न खोजे। ३ उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो जवाफ फर्काउनुभयो: “मोशाले तिमीहरूलाई के आज्ञा दिएका थिए?” ४ तिनीहरूले भने: “मोशाले छोडपत्र लेखेर तिनीसित सम्बन्धविच्छेद गर्ने अनुमति दिएका थिए।” ५ तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरूको मन कठोर भएकोले मोशाले तिमीहरूका लागि यो आज्ञा लेखेका थिए। ६ तर मानिस सृष्टि गर्नुहुँदा सुरुदेखि नै ‘उहाँले नर र नारी बनाउनुभयो। ७ यसैकारण पुरुषले आफ्ना बुबा र आमालाई छोड्नेछ ८ र ती दुई एउटै शरीर हुनेछन्‌।’ त्यसैले अब तिनीहरू दुई होइनन्‌ तर एउटै शरीर हुन्‌। ९ त्यसकारण, जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नुभएको* छ, त्यसलाई कुनै मानिसले नछुट्टयाओस्।” १० उहाँ फेरि घरमा भएको बेला चेलाहरूले उहाँलाई यस विषयमा सोध्न थाले। ११ अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “जसले आफ्नी पत्नीसित सम्बन्धविच्छेद गर्छ र अर्कीसित विवाह गर्छ, उसले परस्त्रीसित यौनसम्बन्ध राखेर आफ्नी पत्नीको हक खोसेको ठहरिन्छ। १२ अनि यदि कुनै स्त्रीले आफ्नो पतिसित सम्बन्धविच्छेद गरेर अर्कोसित विवाह गर्छे भने उसले परपुरुषसित यौनसम्बन्ध राखेको ठहरिन्छ।” १३ तब उहाँले छोइदिऊन्‌ भनेर मानिसहरूले साना केटाकेटीहरूलाई उहाँकहाँ ल्याउन थाले तर चेलाहरूले तिनीहरूलाई हप्काए। १४ यो देखेर येशू रिसाउनुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो: “साना केटाकेटीहरूलाई मकहाँ आउन देओ, तिनीहरूलाई रोक्न नखोज, किनकि स्वर्गको राज्य यिनीहरूजस्ताकै हो। १५ म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, जसले एउटा सानो बालकले जस्तै गरी परमेश्वरको राज्यलाई स्वीकार्दैन, ऊ कुनै पनि हालतमा त्यहाँ पस्नेछैन।” १६ अनि उहाँले ती केटाकेटीहरूलाई आफ्नो अँगालोमा लिनुभयो र तिनीहरूमाथि आफ्नो हात राखेर आशिष्‌ दिन थाल्नुभयो। १७ अनि उहाँ आफ्नो बाटो लागिरहनुभएको बेला एक जना मानिस दौडेर आयो र उहाँसामु घुँडा टेकेर सोध्यो: “हे असल गुरु, अनन्त जीवन पाउन मैले के गर्नुपर्छ?” १८ येशूले उसलाई भन्नुभयो: “तिमी किन मलाई असल भन्छौ? असल त परमेश्वरबाहेक अरू कोही छैन। १९ तिमीलाई यी आज्ञाहरू त थाहै होला नि, कि ‘हत्या नगर्नू, आफ्नो पति वा पत्नीबाहेक अरूसित यौनसम्बन्ध नराख्नू, नचोर्नू, झूटो साक्षी नदिनू, जालसाजी नगर्नू, आफ्नो बुबा र आमाको आदर गर्नू।’ ” २० त्यस मानिसले उहाँलाई भन्यो: “गुरुज्यू, यी सब त मैले सानैदेखि पालन गर्दै आएको छु।” २१ तब येशूले उसलाई हेर्नुभयो र उहाँको मनमा माया पलायो अनि उसलाई यसो भन्नुभयो: “तिमीमा एउटा कुरा अपुग छ। जाऊ, आफूसित भएका चीजबीज बेचेर गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ। तब तिमीले स्वर्गमा धनसम्पत्ति पाउनेछौ अनि आएर मेरो पछि लाग।” २२ यो सुनेर ऊ दुःखी हुँदै आफ्नो बाटो लाग्यो, किनकि ऊसित धेरै धनसम्पत्ति थियो। २३ वरपर हेरेपछि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो: “पैसावालहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा पस्न साँच्चै कठिन कुरा हुनेछ!” २४ उहाँको कुरा सुनेर चेलाहरू छक्क परे। त्यसैले येशूले तिनीहरूलाई फेरि भन्नुभयो: “बाबु हो, परमेश्वरको राज्यमा पस्नु साँच्चै कठिन कुरा हो! २५ धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा पस्नभन्दा त उँटलाई सियोको नाथ्रीबाट छिर्न नै सजिलो हुन्छ।” २६ यो सुनेर चेलाहरू झनै छक्क परे र उहाँलाई सोधे: “त्यसोभए के कसैले उद्धार पाउन सक्ला त?” २७ सीधै तिनीहरूलाई हेरेर येशूले भन्नुभयो: “मानिसहरूको तर्फबाट यो असम्भव छ तर परमेश्वरलाई छैन। किनकि परमेश्वरको तर्फबाट सबै कुरा सम्भव छ।” २८ तब पत्रुसले उहाँलाई भन्न थाले: “हेर्नुहोस्! हामी सबै कुरा छोडेर तपाईंको पछि लागिरहेका छौं।” २९ येशूले भन्नुभयो: “म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, मेरो र सुसमाचारको खातिर जसले घर वा दाजुभाइ वा दिदीबहिनी वा आमा वा बुबा वा छोराछोरी वा जग्गा-जमिन छोड्छ, ३० उसले अहिले खेदोका साथै कैयौं गुणा घर, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा, छोराछोरी, जग्गा-जमिन र आउने युगमा अनन्त जीवन पाउनेछ। ३१ तर धेरै जना जो पहिला छन्‌, ती पछिल्ला हुनेछन्‌ र जो पछिल्ला छन्‌, ती पहिला हुनेछन्‌।” ३२ तिनीहरू यरूशलेमतर्फ उक्लँदै थिए र येशूचाहिं तिनीहरूको अघि-अघि हिंड्दै हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरू छक्क परेका थिए। अनि उहाँको पछि-पछि आइरहेका मानिसहरू डराउन थाले। उहाँले फेरि बाह्र जना चेलालाई अलग्गै लैजानुभयो र उहाँमाथि निश्चय आइपर्ने यी कुराहरू बताउन थाल्नुभयो: ३३ “हेर, हामी यरूशलेमतर्फ उक्लँदैछौं, अब मानिसको छोरा मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूको हातमा सुम्पिइनेछ र तिनीहरूले उसलाई मृत्युदण्ड दिनेछन्‌ र अन्यजातिका मानिसहरूको हातमा सुम्पिनेछन्‌, ३४ अनि तिनीहरूले उसको गिल्ला गर्नेछन्‌, उसलाई थुक्नेछन्‌, कोर्रा लगाउनेछन्‌ र मार्नेछन्‌ तर तीन दिनपछि ऊ ब्यूँतनेछ।” ३५ तब जब्दीका दुई छोरा, याकूब र यूहन्ना उहाँकहाँ आएर यसो भने: “हे गुरु, हामीले जेसुकै मागे पनि त्यो पूरा गरिदिनुहोस् भनी हामी चाहन्छौं।” ३६ उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो: “मैले तिमीहरूका लागि के गरिदिएको तिमीहरू चाहन्छौ?” ३७ तिनीहरूले उहाँलाई भने: “तपाईंले गौरवशाली ओहदा पाउनुहुँदा हामीमध्ये एक जनालाई तपाईंको दाहिने हाततिर र अर्कोलाई देब्रे हाततिर बस्न दिनुहोस्।” ३८ तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरू के माग्दैछौ, त्यो तिमीहरू जान्दैनौ। मैले पिउन लागेको कचौरा के तिमीहरू पिउन सक्छौ? अथवा मैले जुन बप्तिस्मा गर्न लागेको छु के तिमीहरू त्यो बप्तिस्मा गर्न सक्छौ?” ३९ तिनीहरूले उहाँलाई भने: “सक्छौं।” अनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “मैले पिउन लागेको कचौरा तिमीहरूले पिउनेछौ र मैले गर्न लागेको बप्तिस्मा तिमीहरूले पनि गर्नेछौ। ४० तर मेरो दाहिने वा देब्रे हाततिर बस्न दिने अधिकार मसित छैन। जसको लागि यो तयार पारिएको हो, ऊ नै त्यहाँ बस्नेछ।” ४१ जब अरू दस जनाले यो कुरा सुने, तब तिनीहरू याकूब र यूहन्नासित रिसाउन थाले। ४२ तर तिनीहरूलाई आफूकहाँ बोलाएपछि येशूले यसो भन्नुभयो: “तिमीहरूलाई थाहै छ, संसारमाथि शासन गर्नेहरूले आफ्ना जनतामाथि हैकम चलाउँछन्‌ र तिनीहरूका ठूलाबडाहरूले तिनीहरूमाथि अख्तियार जमाउँछन्‌। ४३ तिमीहरूबीच भने यस्तो नहोस् तर तिमीहरूमाझ जो ठूलो हुन चाहन्छ, ऊ तिमीहरूको सेवक हुनुपर्छ। ४४ अनि तिमीहरूमाझ जो पहिलो हुन चाहन्छ, ऊ सबैको दास हुनुपर्छ। ४५ किनकि मानिसको छोरा पनि सेवा पाउन होइन तर सेवा गर्न र धेरैको निम्ति फिरौतीस्वरूप आफ्नो ज्यान* दिन आयो।” ४६ तब उहाँहरू यरिहो पुग्नुभयो। अनि उहाँ, उहाँका चेलाहरू र मानिसहरूको ठूलो भीड यरिहोबाट निस्कँदै गर्दा, (तिमैको छोरा) बर्तिमै नाम गरेका अन्धो माग्ने बाटोको छेउमा बसिरहेका थिए। ४७ जब तिनले नासरी येशू त्यही बाटो भएर हिंड्दै हुनुहुन्छ भनी सुने, तब यसो भन्दै पुकार्न थाले: “हे दाऊदका छोरा येशू, ममाथि कृपा गर्नुहोस्!” ४८ अनि थुप्रैले तिनलाई चूप लाग् भनी हप्काउन थाले तर तिनी भने यसो भन्दै झन्‌ चिच्याइरहे: “हे दाऊदका छोरा, ममाथि कृपा गर्नुहोस्!” ४९ त्यसैले येशू रोकिनुभयो र भन्नुभयो: “उसलाई यहाँ बोलाओ।” अनि तिनीहरूले त्यस अन्धो मानिसलाई बोलाउँदै यसो भने: “साहस गर। उठ, उहाँले तिमीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ।” ५० तब आफ्नो लुगा फ्याँक्दै बुर्लुक्क उफ्रेर तिनी येशूकहाँ गए। ५१ अनि येशूले तिनलाई सोध्नुभयो: “मैले तिम्रो लागि के गरिदिएको तिमी चाहन्छौ?” ती अन्धो मानिसले भने: “गुरुज्यू,* मैले फेरि दृष्टि पाऊँ।” ५२ अनि येशूले तिनलाई भन्नुभयो: “जाऊ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ।” अनि उत्तिखेरै तिनले फेरि देखे र तिनी उहाँको पछि-पछि लाग्न थाले।
^ मर्कू १०:९ * शाब्दिक, “नार्नुभएको।”
^ मर्कू १०:४५ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।
^ मर्कू १०:५१ * शाब्दिक, “रब्बोनी।”